Nebraska, muraayada tallaalka gobolka waxay muujineysaa in ka badan 53% Nebraskans 16 iyo wixii ka weyn ayaa si buuxda loo tallaalay. Waxaa jiray in kabadan 100 kiis oo cusub iyo isbitaalada la seexiyay 75 ee gobolka.
Cudurrada ku dhaca South Dakota waxay dhaceen 17 maalmood oo xiriir ah. Waxaa jiray kaliya 34 kiis oo cusub oo la soo sheegay jimcihii mana jirin dad u dhintay.
Nebraska iyo South Dakota waxay xajisteen goobahooda sida gobolada leh heerka ugu hooseeya ee shaqo la'aanta qaranka bishii hore oo leh 2.8%. Waxay ku xidhan yihiin New Hampshire iyo Utah.
Shaqo la’aanta Iowa ayaa kor u kacday bishii Abriil ilaa 3.8% maadaama tirada dadka degan shaqooyinka ay inyar hoos u dhacday. Heerka Iowa wuxuu ahaa midkii 10aad ee ugu hooseeyay qaranka oo marka la barbardhigo heerka qaran ee Abriil ee 6.1%.
Maanta Hay'adda Ilaalinta Deegaanka ee Mareykanka ayaa ku dhawaaqday in Sioux City ay heli doonto deeqda Brownfields oo ah $ 300,000. Lacagtu waxay u socotaa dhanka qiimeynta meelaha u baahan dib u soo nooleynta, oo ay ku jiraan keydadkii hore iyo magaalada hoose. (Maamulka Biden wuxuu ballan qaaday lacag si loo caawiyo bulshooyinka ay saameeyeen dhul wasakheysan iyo qudhun).